ဆောင်းဦး တောတောင်ရေမြေအလှ, Mulan Lake | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဆောင်းဦး တောတောင်ရေမြေအလှ, Mulan Lake
ဆောင်းဦး တောတောင်ရေမြေအလှ, Mulan Lake
Posted by weiwei on Nov 15, 2010 in Photography, Travel | 25 comments
Hubei Mulan Tianchi မုလန်
ဆောင်းဦးရာသီမှာ သစ်ရွက်တွေအရောင်ပြောင်းပြီး ကြွေကျနေတာကို မြင်မိတော့ ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ချစ်သက်သေ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲကို သတိရမိပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဆောင်းဦးရာသီ သဘာဝရှုခင်းတွေကို တင်ပြချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ မနေ့ကပဲ တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်း ဟူးပေပြည်နယ်ထဲက မုလန်နတ်ရေကန်လို့ခေါ်တဲ့ နေရာကို သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မုလန်ရေကန်က တောင်ပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ရေကန်လေးတစ်ခုပါ။ တောင်ပေါ်ကို တော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းတက်လိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်မြင့်လဲသေချာမသိပေမယ့် ကျိုက်ထီးရိုးက ရသေ့တောင်ကနေ တောင်ပေါ်ကို ခြေလျှင်တက်သလောက် ခက်ခဲ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်ကြားတွေမှာ ရေတံခွန်လေးတွေ သစ်ပင်ရောင်စုံလေးတွေနဲ့ ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ ရာသီဥတုကလဲ ၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ပဲရှိလို့ တောင်လေနဲ့ တော်တော်လေးအေးပါတယ်။ သိပ်နံမည်ကြီးလှတဲ့ နေရာတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ဆောင်းဦးအလှကို တင်ပြချင်တာကြောင့် အပင်ပန်းခံ အချိန်ကုန်ခံပြီး ပို့စ်တင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်အောင် တစ်ချက်လောက်တော့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် …
မုလန် ဆိုတော့ ကာတွန်းမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းမလေး နာမည်များလား။ အဲဒီ မုလန် ကာတွန်းကိုတော့ သိပ်သဘောကျတယ်။
နောက်ဆုံး ဘုရင်ကြီး ပြောတဲ့ စကားလေး ပိုတောင် အမှတ်ရနေတယ်.. ဒီလိုလူမျိုး.. နောင် ၁၀နှစ်မပြောနဲ့ မင်းဆက်နဲ့ ချီပြီး ကြည့်ရင်တောင် ဒီလို ရဲရင့်တဲ့ သူရဲကောင်းမျိုး ရှာလို့ မရနိုင်ဘူးတဲ့။ ပြောရင်းနဲ့ ကာတွန်းကားထဲ ရောက်ကုန်ပြီ။ လှတယ်နော်.. ဒါနဲ့ တောင်တက်တာ ကျိုက်ထီးရိုးတက်သလို ဆိုတော့ တောင်မွေး လေးနဲ့ တက်ကြလား ဒီတိုင်းဘဲ ကုတ်ခြစ် တက်သလား။
ကုတ်ခြစ်တက်ရတာမဟုတ်ဘူး … လှေကားတွေနဲ့ မက်စောက်တယ် … မုလန်ဇာတ်လမ်းပြန်ရှာကြည့်အုန်းမယ် .. ဆူးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ် … မုလန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်း သမိုင်းပြတိုက်အသေးလေးတွေ့ခဲ့တယ် … တရုတ်စာတွေမို့ မဖတ်ခဲ့လိုက်မိတာ …
လွယ်လွယ် ကူကူ Disney Cartoon ဖြစ်တဲ့ မုလန် ကာတွန်း ရှာကြည့်လိုက်.. အရမ်း သဘောကျတယ်။ ဆူး က အမျိုး သမီး ဟီးရီုးတွေဆို သိပ်သဘောကျတယ်။ အဲဒီ ကာတွန်းမှာ ဘုရင်ကြီးက ခေါင်းငုံ အလေးပြုတော့ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေ အားလုံး ဒူးထောက်ပြီး ခေါင်းဝပ် အလေးပြုတဲ့ အခန်းက တကယ် ကို စိတ်ထဲမှာ အားလုံးက အလေးပြုတာ ခံလိုက်ရသလိုဘဲ.. သီချင်းလည်း ကောင်းတယ်။ I be the man, out of you… ဆိုပြီး ဆိုတာလည်း အရမ်း နားထောင်ကောင်းတယ်
မုလန်သူရဲကောင်းမလေးအကြောင်း ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ အဲဒီသူရဲကောင်းပေါ်ခဲ့တဲ့ ပြည်နယ်ကို အတိအကျမပြောနိုင်ကြပဲ ဟဲနန်ပြည်နယ် (သို့) ဟဲပေပြန်နယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ် … မုလန် （木兰） ဆိုတာ နံမည်တစ်ခုမို့လို့ ဆူးပြောတဲ့ သူရဲကောင်းရယ် … အခုပုံထဲက မုလန်ရေကန်ရယ် .. နောက်ပြီး တခြား မုလန်တွေ အများကြီးရှိသေးတယ် …
မုလန် ဆိုတာ ပန်းနာမည် မဟုတ်ဘူးလား ဆရာမ.. မုလန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စကားပုံတောင် ရှိသေးတယ်လေ.. မုလန်ပန်း နွားချီးပုံပေါ်ကျသလိုဘဲ.. သိတယ်မလား မတန်တရာ ဆိုရင် အဲဒီလို ခိုင်းနှိုင်းတတ်တယ်။
မှတ်ချက်– မုလန်ပန်း ဆိုတာ ဘယ်လို ပန်းမျိုးကို ခေါ်လဲတော့ မသိပါ။
မုလန်ပန်းက ဗမာပြည်မှာ မရှိဘူး … တရုတ်ပြည်မှာတော့ ဆောင်းရာသီအကုန်မှာ ပွင့်တတ်တယ် … အဲဒီပန်းတွေက အအေးပိုင်းဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်ပေါတယ် … ပုံကြည့်ချင်ရင် အောက်ကလင့်ကနေဖွင့်ကြည့်လိုက် …
လင့်အတိုင်း သွားကြည့်တာ တခု မေးစရာပေါ်လာတယ်..
အဲဒီမှာ အမွှေးလေးတွေနဲ့ အဖူးလိုလို ကျည်ဆန် ထိပ်ဖူးလိုလို ပန်းကလေးကကော မုလန် ပန်းများလား။ အဲဒီ အမွှေးလေးနဲ့ အဖူးလေးတွေပါတဲ့ အကိုင်းအခက်တွေ တရုတ်ပြည်က လာတယ် ဆိုပြီး ရောင်းတာတော့ ရှိတယ်။ သူလည်း ၀ယ်ပြီး ပန်းအိုးထိုးထားရင် တော်တော် ခံတယ်။ အနီ အ၀ါ အရောင်စုံလို့.. အမွေးလေးနဲ့ အဖူးတွေ အများကြီးပါတဲ့ ပန်းခြောက်.. ကြာသွားရင် သူလည်း အရောင်တွေ ကျွှတ်ပြီး နောက်ထွက်တဲ့ အဖူးလေးတွေ အဲဒီလို မွဲခြောက်ခြောက် မလှတဲ့ အရောင်လေးတွေ ဖြစ်သွားကော.. ပြောရင်းနဲ့ ပန်းအိုးထိုးတဲ့ ပန်း အကြောင်း လာရှင်းမိနေတယ်။ ဟုတ်လားလို့ မေးတာ
Thank share to Mulan Lake pics~!^.^
တရုတ်ပြည်ရဲ့ သန်းထောင်ကျော်လူထုကြိးပမာဏနဲ့တွက်ရင် .. နေရာတကာ လူပင်လယ်တွေချည်းထင်ထားတာ..။
၀င်ခတွေများပေးရလို့ … လူနည်းတာလား…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. သဘာဝအလှတွေ သေသေချာချာ ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်တာတော့ … လေးစားစရာပါ..။
၀င်ကြေးက ၂၀ ယွမ်ထဲပါ .. ဈေးသက်သာပါတယ် … ခရီးသွားရာသီချိန်မဟုတ်လို့ထင်ပါတယ် … လူတော်တော်နဲတယ် …
အဆင်သင့်ရင် တရုတ်ပြည်က နာမည်ကျော် ရှောင်လင်ကျောင်းတော်နဲ့ အခြားနာမည်ကြီး သိုင်းဂိုဏ်းတွေဖြစ်တဲ့ ဝူတန်းတို့ အော်မေ တို့ကိုပြောပြပါအုံး။ ကိုယ်တိုင်မရောက်ဖူးလဲ သူမျာပြောနဲ့ပေါ့နော်။ စိတ်ကူးယဉ်ပြောလဲရပါတယ် ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့။ လျို့ဝှက်သိုင်းကျမ်းရယ်၊ နှစ်တထောင်အားဆေးမြစ်ရယ်၊ ကျောက်စိမ်းအေးစိမ့်ဓါးရယ် ပါရင်တော်ပါပြီ။
၀ူတန်းတောင်ကိုတော့ ရောက်ဖူးတယ် … ဓါတ်ပုံတွေလဲရှိပါတယ် … ပြန်ရှာပြီး တင်ပေးမယ် … ၀ူတန်းမှာ ရုပ်ရှင်ထဲက သိုင်းသမားတွေ ခေါင်းဆောင်တွေက အခုထိ တကယ်ရှိနေသေးတယ် … ရှောင်လင်နဲ့အောက်မေ့ကိုတော့ မရောက်ဖူးဘူး …
မဝေ နောက်များ ကြုံရင် တရုတ်ပြည် နန်းတော် ကို တင်ပါအုန်း.. အဲဒါလေး လိုသေးတယ်။ ပီကင်းမြို့ အထင်ကရ နေရာလေးတွေပေါ့.. ပြည့်စုံသွားအောင်
ဆူးလုပ်တာနဲ့ ပန်းတွေလျှောက်လေ့လာနေရပြန်ပြီ … မုလန်ပန်းက တော်တော်အမျိုးအစားစုံလင်တယ် … အရမ်းလှတယ် … တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးထဲမှာလဲသုံးတယ် … အောက်က လင့်မှာကြည့်ကြည့်လိုက် …
လေ့လာမိတော့ အသိပညာ တိုးတာပေါ့.. ဆက်လက်ပြီး လေ့လာ မိတာလေးတွေ တင်ပြပါအုန်း.. အားပေးမယ်နော်
သဘောကျတာပါ … မိန်းကလေးဆိုပြီး အိမ်ထဲမှာပဲနေစရာမလိုဘူးဆိုတာနဲ့
ကိုယ့်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကို အောင်မြင်အောင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာ အားကျစရာပါ။
အရမ်းလှပါတယ် အခုလို သဘာ0ပတ်0န်းကျင် အလှလေးတွေကို တပင်တပန်းသွားရိုက်ပေးပြီး ဝ0မျှပေးတဲ့ မဝေကိုလဲ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. တရုတ်ပြည်ကို မရောက်ဖူးပေမဲ့ မဝေ တင်ပေးတဲ့ ပို့စ် တွေကိုကြည့်ရင်း တော်တော်ရင်းနှီးနေပါပြီ ….
mulan က ကာတွန်းတင်မကဘူး
ရုပ်ရှင်လဲရှိတယ်လေ mulan နေရာမှာ Wei Zhao (14blades, so close) ထဲကမင်းသမီးပဲ ကာတွန်းကော ရုပ်ရှင်ကောကြိုက်တယ် နှစ်ခုစလုံးကောင်းတယ် ချစ်တဲ့သူကိုစွန့်လွှတ် ကိုယ်တိုင်ကလဲအသက်စွန့်ပီး တိုင်းပြည်ကိုအကြိုးပြုခဲ့တဲ့သူပါ
ဂီဂီရဲ့ ဆောင်းဦးပုံလေးတွေမြင်တော့ သတိရတာနဲ့ ပြန်ရှာပြီး မန့်လိုက်တယ် …
မနှစ်က တင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ …
ဒုတိယ ပုံက အရွက်ဝါနေတဲ့ အပင်ကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်……
ရန်ကုန်မှာတော့ မရှိတာ သေချာတယ် ….
ရွာထဲက ဆောင်းရာသီအတွက် ပိုပြည့်စုံသွားစေတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။
ဒီဇင်ဘာရောဂါတောင် တက်လာပြီး ပိုစ့်တင်ဖြစ်တော့မယ်။
လှတယ်ဗျိုး ပုံတွေက ဂွဒ်ရှယ်ပဲ
အသစ်ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း အဟောင်းတစ်ဝဲလည်လည် ဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မယ်နဲ့တူရဲ့…….